जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत: भोलिदेखि कारोबार सुरु, ओपनिङ रेञ्ज ९१५ रुपैयाँ ! - Arthatantra.com
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत: भोलिदेखि कारोबार सुरु, ओपनिङ रेञ्ज ९१५ रुपैयाँ !
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ सूचीकृत भएको छ ।
कम्पनीको ६० लाख ८४ हजार कित्ता आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सूचीकृत भएसंगै भोलि अर्थात बिहीबारदेखि कम्पनीको आईपीओ दोस्रो बजारको काराकेबार सुरु हुनेछ ।
कम्पनीको आईपीओले दोस्रो बजारमा पहिलो सेयर कारोबारका लागि ३०५ रुपैयाँ २७ पैसादेखि ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा सम्म ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणअनुसार कम्पनीको आव २०७६÷७७ को बास्तविक प्रतिसेयर नेटवर्थ ३०५ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ ।
सोही अनुसार कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेबाट उक्त मूल्य बराबरको ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको हो ।नेप्सले कुनै पनि कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि सम्बन्धीत कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थको विन्दुदेखि त्यसको ३ गुणा विन्दुसम्मको ओपनिङ रेन्ज तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार कम्पनीले पहिलो सेयर कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज पाउने छ ।
कम्पनीले असार ११ गते देखि १५ गतेसम्म १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमध्ये ३० हजार ४२० कित्ता कर्मचारीको लागि ९८ हजार ८६५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको र बाँकी रहेको १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको थियो ।
उक्त आईपीओ १० कित्ताका दरले १ लाख ८४ हजार ८०१ जनाले पाएका छन् । कम्पनीको सेयरमा २० लाख १८ हजार ३०१ ओटा योग्य आवेदन परेको थियो । त्यसमा १ लाख ८४ हजार ८०१ आवेदकमध्ये पाँच जनाले आवेदकले ११ कित्ताका दरले शेयर पाएका थिए ।
वि.सं.२०७८ साउन १३ बुधवार १४:४६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे १० वर्षदेखि कर नतिर्नेको घरघरमा माइकिङ महानगर, कर छल्न खोज्नेमा शुभश्री को-अपरेटिभदेखी अस्पताल, कलेजसम्म
पछिल्लाे कोरिया जान नपाएका युवाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह